China Full Steel Dome Head Blind Rivet umzi-mveliso kunye nabavelisi |Yuke
Intloko yentsimbi eyiDome eyimfama epheleleyo iRivet
Iirivets zisigxina, iziqhoboshi ezingenamisonto ezidibanisa izinto kunye.Ziquka intloko kunye ne-shank, ekhutshazwa sisixhobo sokubamba i-rivet endaweni.iirivets Blind kwakhona mandrel, nto leyo inceda ukufaka rivet kwaye iqhawule emva kokufakwa.
I-Full Steel Dome intloko eyimfama eyi-rivet yikhonkco yentsimbi enesakhiwo esikhethekileyo kunye namandla aphezulu okukhwela, kwaye yeyamalungu amatsha okubopha.Inamandla aphezulu okuqina kunye nokucheba.
Izinto: Umzimba Wentsimbi / Isiqu sentsimbi
UkuQeda komphezulu: I-Zinc efakwe kwi-Zinc
Umgangatho: IFI-114 kunye ne-DIN 7337, GB.Non-standard
Iinkcukacha zeDome Head Blind Rivet
3.Isicelo: I-elevator, ulwakhiwo, umhombiso, ifenitshala, ushishino.
5.Umthamo wemveliso: iiToni ezingama-500/ngenyanga
6.Uphawu lwentengiso: YUKE
I-9.QC (ukuhlola kuyo yonke indawo) Ukuzijonga ngokuzimeleyo ngemveliso
1.Sebenzisa kakuhle ngezinto ezithambileyo.bonelela ngomphezulu wokuthwala omkhulu wokuqina.
2.Ukubonelela ngomphezulu wokuthwala omkhulu wokuqinisa izinto ezijongene nezithambileyo nezibhitye kunye nemingxuma ejonge ngaphezulu.
3.I-diameter ye-flange eyandisiweyo ikhusela ingqibelelo yesicelo.
Ixesha lokukhokhela : 15 ~ 20 Usuku lokuSebenza lwe-20' Container.Iintsuku ezi-5 ukuba unempahla.
2. Ibhokisi yombala omncinci,, ibhokisi yombala wedrowa ye-45degree, ibhokisi yefestile, i-polybag, i-blister.Ukupakisha kabini iqokobhe okanye njengemfuno yabathengi.
1.Siyifektri, ngoko sinokuzimela kwimveliso yokuvelisa, nanini na, naphi na apho, sinokukubonelela ngempahla ngexesha elifanelekileyo.
2. Ngexesha lexabiso lasefektri, ungagcina imali eninzi ukuthenga iimpahla ezininzi.
3. Umgangatho uqinisekisiwe, sineseti epheleleyo yezixhobo zokuhlola.
4. Ukutyelela umzi-mveliso wamkelwa ngokufudumeleyo, emva koko, ukubona kukukholelwa.
5. Isampuli inokunikelwa simahla.
I-6.Over 10 iminyaka yamava okuvelisa, abasebenzi abaziingcali, isidima esibalaseleyo esenza ukuba sigcine iklasi yokuqala.
Ngaphambili: I-Aluminium Steel Dome Head Blind Rivet
Okulandelayo: I-Aluminiyam epheleleyo yeDome yentloko eyimfama iRivet
Yonke i-Aluminiyam yeDome yeNtloko evulekileyo iPhelisa i-rivet eyimfama
IAluminiyam yePop Rivets itywiniwe
Ipeyintiwe iAluminiyam Rivet
IAluminiyam iiBlind Rivets zePop Rivets ziVula isiqingatha sesiphelo...
IAluminiyam Lantern Blind Rivet
Intloko flat riveting nut